Ikhabhathi yolwandle i-Idyllic kwindawo yokuma eSenja - I-Airbnb
Ikhabhathi yolwandle i-Idyllic kwindawo yokuma eSenja
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
I-Idyllic cottage kanye elunxwemeni. Indawo entle enombono omangalisayo kunye nendalo. Apha unethuba lokunandipha inkululeko, indalo kunye nomoya omtsha. Unokuhamba kunxweme olunesanti kwaye ujabulele izibane ezisemantla okanye ilanga lasezinzulwini zobusuku, kuxhomekeke kwixesha lonyaka. Iimeko ezigqwesileyo zokuloba kunye nokuhamba intaba. I-cottage inamagumbi amabini okulala kunye nekhitshi / igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa. Igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa, kunye nebalcony ejonge elwandle. Iibhedi zilungele iindwendwe. Ihlala abantu abayi-5. Wi-fi ifakiwe.
Ikhabhathi ikwimizuzu emi-5 ukusuka kwilali iBotnhamn eSenja, iyure nje ukusuka kwidolophu ekufutshane (Finnsnes 50min). Ehlotyeni, isikhephe siya eBrensholmen nguSommarøy. Ungaqhuba uye eTromsø (1h) ukusuka apho. I-Botnhamn iyaziwa "ngobuncwane bayo besilivere" obufunyenwe ukususela ngonyaka we-1000. Kukho imyuziyam yasekhaya apha kwabo banomdla. Ukusuka eBotnhamn unokuthatha uhambo oluya eLyngen ukuze ufumane ama-glaciers (3h). Okanye Camp Tamok e Tamokdalen (2.5h) inja encinane sledding okanye snowmobiling. I-Senja izele ziintaba ezintle kunye nendalo egqithisileyo, ke apha kukho amathuba amahle okunyuka intaba ehlotyeni nasebusika. Ukuba ukhangele izibane ezisemantla, akukho mfuneko yokuba ujonge ngakumbi, ukhuselwe kwingxolo kunye nezibane zedolophu, kukho iimeko ezibalaseleyo zokukhanya zasentla. Izilwanyana zasendle nazo zahlukene apha kwaye unokufumana ama-whales, i-salmon yasendle, i-elk, amaxhalanga olwandle, kunye ne-reindeer kanye ngaphandle komnyango. Kukho igrosari yemizuzu emi-3 ngemoto ukusuka kwi-cottage, kunye nesikhululo segesi malunga ne-30 min.
Ujikelezwe yindalo entle, kukho amathuba amahle okufumana izibane ezisenyakatho, ilanga lasezinzulwini zobusuku kunye nobomi obutyebileyo bezilwanyana ngasemnyango. I-10 phezulu inikezela ngeentaba ezintle eziphawulweyo ezinemibono emihle. Ukunyuka kwentaba okukufutshane ukusuka kwikhabhini ukuya eAstritinden 742 masl. kwaye uhambo luqala kwi-cottage. Udumo lwe "Sail" 639m (20min) kude, Breitinden 1001m (20min). Ebusika, ukunyuka kwentaba kudume kakhulu kulo lonke elaseSenja. Kwakhona kolu hambo uya kufumana izilwanyana zasendle. Ukhozi olunomsila omhlophe luxhaphake njengamangabangaba eSenja. E-Botnhamn "iziko" kukho ivenkile yendawo ebonelela ngokutya, kunye ne-cafe kumgangatho wesibini, apho bathengisa khona i-burgers, i-baguettes kunye nezinye izonka.
Finnsnes - 50 min yokuthenga
I-Sommarøya ngesikhephe ngamava e-safari yolwandle-imizuzu engama-40 (ehlotyeni kuphela) ukuya eTromsø 1h xa uyokuthenga
I-Lyngen 3h glacier, isikhephe se-RIB, iintaba kunye nokunyuka kwengqungquthela
Camp tamok 2.5h- Dog sledding, scooter ride kunye nokukhwela reindeer.
I-Lyngen 3h glacier,…